धमलालाई कार्यक्रममै अतिथिले लछारपछार पारेपछि ,आखिर को हुन् उनी ? (भिडियो) – Sunaulo Nepal TV
धमलालाई कार्यक्रममै अतिथिले लछारपछार पारेपछि ,आखिर को हुन् उनी ? (भिडियो)
पत्रकार धमलाले अनेक फन्डा मच्चाउने गर्छन् । उनी नेपालकै चर्चित पत्रकार पनि हुन् । तर, उनका केहि अन्तर्वार्ताको शैलि र प्रश्नले विवाद सिर्जना गर्ने गर्छ । उक्त दृश्य हेर्न १३ मिनेट ४० सेकेन्डमा फरवड गर्नुहोस्ः
Previous निर्देशक सुदर्शन थापा र मोडल सुप्रियालाई बधाई, विवाह बन्धनमा बाँधिए
Next ७६ जना युवतीसँग विवाह, २०० जना युवती बेच्ने युवक पक्राउ